जान्नुहोस् : किन हामीलाई दोहोर्‍याएर यौन सम्बन्ध राख्न मन लाग्छ ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
यौन चाहना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एक विशेषता हो र सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौन चाहना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि आवश्यक छ । यौनसम्बन्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् ।
मस्तिष्कको Hypothalamus भन्ने सानो अंगले यौनसम्पर्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता प्राणीमा उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग CerebralCortex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरूलाई अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ । यौन संवेदनशीलतासम्बन्धी कुराहरू पनि यसै भागबाट सञ्चालित हुन्छन् । यौन इच्छालाई प्रभावित पार्ने हर्मोनहरूको उत्पादन तथा सञ्चालनमा पनि मस्तिष्कको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै कुराहरूको संयुक्त प्रभावबाट नै यौनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू निर्देशित हुन्छन् । यौनसम्पर्क होस् वा अन्य यौन क्रियाकलाप ती वास्तवमा शारीरिक तथा मानसिक दुवैको समन्वयमा हुने एक जटिल प्रक्रिया हो । मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एक त इन्डोक्राइन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कोतिर इन्द्रीय प्रणालीका अनि मस्तिष्कले ।
त्यसैले यो स्वाभाविक हो कि कुनै पनि व्यक्ति यस्तो सुख प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन् । उसले सो सुख पुन: प्राप्त गरेमा उसले सो सुख फेरि पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ र यसले निरन्तरता पाउँछ ।
यो कसरी सञ्चालित हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि एकपल्ट नियालेर हेरौं । यस्ता प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने पुरस्कार प्रणाली (Rewardsystem) भनिन्छ । यो प्रणालीले हामीलाई सुख वा आनन्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, नशालु वस्तुको प्रयोग होस् वा यौनसम्पर्क । त्यसैगरी दु:ख वा पीडादायक कुराबाट टाढा बस्न लगाउाछ ।
यस क्रममा हाम्रो मस्तिष्कको विभिन्न भागबाट हुने कार्यको संयोजनको कार्य भने Striatum भन्ने भागले गर्छ ।यो प्रक्रियामा Dopamine भनिने Neuro-Transmitter को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै आनन्ददायी क्रियाकलापभन्दा पहिले जति बढी मात्रामा Dopamine मस्तिष्कमा निस्कन्छ त्यति नै बढी आनन्द प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
यसको केही मात्रामा अनुभव भए पछि, मस्तिष्कमा स्मृति ( Memory) बन्दछ र यही स्मृतिको आधारमा हामीले केही निश्चित क्रियाकलाप आनन्ददायी हुने अपेक्षा गर्छाैं । हामीले प्राप्त गर्ने आनन्द हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा नै हुने यउष्यष्मक को कारणले प्राप्त हुन्छ । Dopamine निस्किए पछि Opioids निस्कन्छन् ।
अब त पक्कै नै बुझ्नु भयो होला कि किन एकपल्ट यौन सम्पर्क गरे पछ फेरि-फेरि यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने मस्तिष्कको यस्तो पुरस्कार प्रणाली मानवलगायत सबै जसो नै प्राणीमा हुनुले उक्त प्राणीको वंशजलाई निरन्तरता दिन प्रकृति ले नै दिएको वरदान हो भन्न सक्छौं ।
प्रकाशित मिति: Nov 23, 2021
हाडजोर्नी दुखाइ तथा यौनदुर्वलताको अचुक औषधि चिप्लेकिरा !
चिप्लेकिरा नाम सुन्दा नै हामीलाई अलि अर्कै फिल हुने गर्छ । कति मानिसले त छुन
लामो समयसम्म यौन सम्पर्क नगर्दा शरीरमा आउछ यस्तो परिवर्तन !
यो संसारमा सबै सजिव प्राणीहरुलाई यौन जीवन आवश्यक परेको हुन्छ । हामीले यो संसारमा साना
यौनसम्पर्क गर्दा चरम आनन्द नहुने समस्या किन हुन्छ ? जान्नुहोस् !
मानिसको जीवनको महत्पूर्ण भाग अन्तर्गत यौन जीवन एक पर्छ । यदी मानिसको यौन जीवन आनन्दमय
यौन सम्भोग, उत्तेजना, भ्रम र जान्नैपर्ने पक्षबारे थाहापाउनुहोस् !
थुप्रै मानिस यौन समस्या लिएर अस्पताल या डाक्टरकहाँ आउँछन्। खासगरी सम्भोग इच्छामा कमी आउने, विर्य